Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General - on Myanmar | United Nations in Myanmar
The Secretary-General is appalled by the escalating violence in Myanmar at the hands of the country’s military. The killing of demonstrators, arbitrary arrests and the reported torture of prisoners violate fundamental human rights and stand in clear defiance of calls by the Security Council for restraint, dialogue andareturn to Myanmar’s democratic path.
The Secretary-General urges the international community to work collectively and bilaterally to help bring an end to the repression by the military. He urges the military to allowavisit by his Special Envoy as an important element in calming down the situation and setting the stage for dialogue and return to democracy.
The Secretary-General will continue to stand with the people of Myanmar and their democratic aspirations.
၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မှ ထုတ်ပြန်သော မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ချက်
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် မြန်မာစစ်တပ်ကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း အကြမ်းဖက်များ မြင့်တက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းအတွက် များစွာတုန်လှုပ်စိတ်ပျက်မိပါသည်။ ဆန္ဒပြသူများအား သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူများကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းများသည် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှ ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်၊ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသို့ ပြန်တင်ပေးရန် တိုက်တွန်းချက်များကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဆန့်ကျင်ဖီဆန်နေခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်၏ ဖိနှိပ်လုပ်ဆောင်နေမှုများ အဆုံးသတ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ အတူတကွစုပေါင်း၍လည်းကောင်း၊ တစ်နိုင်ငံချင်းအနေဖြင့်လည်းကောင်း ကူညီပေးကြရန် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်မှ တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ အခြေအနေများ တည်ငြိမ်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသို့ ပြန်သွားရန်လိုအပ်သည်များကို ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်အားနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခွင့်ပေးရန်ကိုလည်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်က စစ်တပ်ကို တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် မြန်မာပြည်သူများ၊ ၎င်းတို့၏ ဒီမိုကရေစီအား ပြင်းပြစွာ လိုလားတောင့်တမှုများနှင့်အတူ ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Stéphane Dujarric.
UN Secretary-General Spokesperson